संसारमा संविधान दिवस मनाउन राज्यले उर्दी जारी गरेको सुन्नुभएको छ ? – Etajakhabar
चार वर्ष बित्दाखेरी संविधान दिवस मनाउनका लागि सरकारले उर्दी नै जारी गर्नुपर्यो । तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो संविधानका बारेमा कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर । हामी के पढ्छौँ भने संविधान भनेको नागरिकको, देशको आस्थाको दस्तावेज हो । जहाँ जनताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुन्छ । यसलाई राज्यको घोषणपत्र भन्छन् । त्यसैले जुन जुन देशमा संविधानले काम गरेको छ, त्यो देशमा संविधानलाई एउटा ठूलो धार्मिक ग्रन्थजस्तो, आफ्नो जीवनको आदर्शग्रन्थ जस्तो त्यो रूपमा लिएर पूजा गर्छन्, सम्मान गर्छन् । आज हामीले नेपाली जनताले पठाएका प्रतिनिधिबाट संविधान बनायौँ ।
संविधान जारी भएको ४ वर्षमा दिवस मनाउन सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्यो । यो संविधानको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई । मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने संविधान दिवस मानिसले आफ्नो इच्छाले मनाउन पाउनुपर्छ । स्वतस्फूर्त रूपमा संविधान दिवस मनाउने दिन त्यतिबेला आउँछ जतिबेला संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छन् । संविधानमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन् ।
संविधान जारीपछि सबैभन्दा ठूलो त्रुटि यसको पहिलो पाठमा गरियो । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो पाठमा यति ठूलो त्रुटि गरिएको छ कि म त्यो लाइन म तपार्इंहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु– सामन्ती, निरङ्कुस, एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै किसिमका उत्पीड्नको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उहाँहरूलाई यो कुराको हेक्का भएन कि दुनियाँका २ सय १ देशमा एकात्मक शासन प्रणाली छ ।
सङ्घीयता भनेको त केवल दुई दर्जन मुलुकहरूमा मात्र हो । उहाँहरूले भनेका कुराहरूलाई पनि हामीले स्वीकार्यौँ । हामी सबै प्रकारका विवेद गर्छौं भन्नुभएको छ । आज संविधान जारी भएको ४ वर्ष भयो । यो देशका प्रत्येक सीमान्तकृत वर्गले यो संविधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । दलित, जनजाति यो संविधानप्रति खुसी छैन । तराईको ठूलो हिस्सा यो संविधानप्रति खुसी छैन । अरू समुदायका मानिसहरूले पनि यो संविधानलाई आफ्नो अधिकारको दस्तावेज मान्न तयार छैनन् ।
अनि तेस्रो प्रतिज्ञा संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने भनेर । आज संविधानले थुप्रै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू खडा गरेको छ । १३ वटा संवैधानिक निकायहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ । १३ वटा आयोग भनिएको छ, ३ वटामा आजको दिनसम्म एउटा पनि पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन् । यो कुन प्रकारको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रक्रिया हो ।
५ वटा आयोगमा एक एक जना मात्र पदाधिकारी छन्, सिङ्गो संविधानले परिकल्पना गरेको १३ वटा आयोगमा १ तिहाइ कर्मचारी छैनन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र भागवण्डाका लागि उहाँहरूले यसो गरिराख्नुभएको छ । यस्तो भएपछि मान्छेले स्वतस्फूर्त रूपमा संविधान किन मान्छ र ? किन संविधान दिवसमा सहभागी हुन्छ र ? त्यसकारण सरकारले उर्दी जारी गर्नुपरेको हो ।
बोल्न निषेध गर्ने, जिल्ला प्रवेश गर्न निषेध गर्ने, यो कुनै लोकतन्त्र हो ? संविधानको शासनमा के हुन्छ भने संविधान जारी भएपछि संविधानलाई मान्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । संविधानका कतिपय प्रावधानमा तपार्इं भिन्न मत राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, कतिपय संविधानका आधारमा सत्तामा पनि जाने र संविधान पनि पालना नगर्ने, विरोध पनि गर्ने त्यो छुट चाहिँ संविधानले दिएको हुँदैन । त्यसरी पनि केही व्यक्तिले राजनीति गरिरहेका छन् । तर नागरिकलाई, व्यक्तिलाई नागरिकको हैसियतमा संविधानप्रति विमति राख्ने अधिकार हुन्छ ।
त्यसका बाबजुत पनि संविधानलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो संविधानको अनिवार्य सर्त हो । तर सरकारले यो संविधानलाई कसरी धावा बोल्यो भने वाक स्वतन्त्रतालाई कसरी सङ्कुचित गर्ने, न्यायालयलाई कसरी सङ्कुचित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो । न्यायालयलाई हेर्नुस्, २०४७ सालको संविधानपछि नेपालको न्यायालयलाई संसारकै बलियो न्यायालय भन्थे, त्यति बेलाको संविधान बाहिरी देशका लागि कपी गरिएको छ । न्यायसम्बन्धी व्यवस्था, प्रक्रियाहरू, उदाहण दिउँ श्रीलङ्कामा सन् २००१ मा हाम्रो देशको संवैधानिक व्यवस्थालाई उनीहरूले कपी गरेर बनाएका थिए । यसका अतिरिक्त ठूला देशहरूमा पढाउने, रिफेरेन्सका रूपमा लिने परिपाटी बसिसकेको थियो ।
(संविधान दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार, हामीले स्वदेश नेपालबाट साभार गरेका हौ )
Posted on: Saturday, September 21, 2019 Time: 9:31:33
-15513 second ago
-14966 second ago
-10329 second ago
-8945 second ago
-8079 second ago
-6275 second ago